Audi ထုတ်လုပ်သူများအတွက်သော့ခွံ | Audi စက်ရုံနှင့်ထောက်ပံ့သူများအတွက် China Key shell
Audi A6L Q7 A2 A3 A4 A6 A6 A6L A8 T8 2008 2009 2010 2011 အတွက်ခလုတ် ၃ ခုခေါက်လှန်ခိုင်းသောအကွာအဝေးအခွံခွံအခွံခရိယာမ်ား။
Audi A6L Q7 A2 A3 A4 A6 A6 A6L A8 T8 2008 2009 2010 2011 Audi A6L Q7 A2 A3 A6 A6L A8 TT 2008 2009 2010 2011 လျှောက်ထားချက် - Audi နဲ့တခြားမော်ဒယ်တွေအတွက်လျှောက်ထားချက် - Audi နဲ့ငါတို့ရဲ့ပုံနဲ့တူတဲ့တခြားမော်ဒယ်တွေအတွက်။ အင်္ဂါရပ်များ: ၁၀၀% ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်! ကျိုးပဲ့သို့မဟုတ်ဟောင်းနွမ်းသော့များအတွက်အကောင်းဆုံးအစားထိုး, ဒါမှမဟုတ်တစ် ဦး အပိုဆောင်းသော့ချက်အဘို့ကြီးသော။ သော့ခလောက်နှင့်သော့ဓါးကိုသာ။ မဟုတ်အီလက်ထရောနစ် internals ။ ဒေသခံသော့ခတ် / ကုန်သည်မှဓါးသွားဖြတ်ယူပါ။ သတိပြုရန်: ၁။ ဤပစ္စည်းသည်အတွင်းပိုင်းပါ ၀ င်သောအဝေးထိန်းတစ်ခုဖြစ်သည် (အဝေးထိန်း / အီလက်ထရွန် ...
Audi A4l A3 A4 A5 A6 A8 Quattro Q5 Q7 A6 A8 အဝေးထိန်း Key Shell Case HU66 Fob အစားထိုးကား Smart Key Shell3ခလုတ်များ
Audi A4l A3 A4 A5 A6 A8 Quattro Q5 Q7 A6 A8 Remote Key Shell Case HU66 Fob Replacement Car Smart Key Shell3ခလုတ်အခြေအနေ ၁၀၀% အသစ်အရောင် - ရုပ်ပုံတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းခလုတ် - ၃ ခလုတ်အရွယ်အစား - ၇.၉ စင်တီမီတာ * ၃.၈ စင်တီမီတာ * ၁.၂ စင်တီမီတာ (L * W * H) အလေးချိန် - 60 ဂရမ်အသွင်အပြင်လက္ခဏာများ - ကျိုးထားသောခလုတ်များသို့မဟုတ် ၀ တ်ဆင်ထားသည့်သော့ခလောက်များဖြင့်သော့တစ်ချပ်အတွက်အကောင်းဆုံးအစားထိုးခြင်း။ ၂။ Key case နှင့် uncut key blade သာဖြစ်သည်။ 3. ဒေသခံသော့ခတ်သူ / ကုန်သည်မှဖြတ်တောက်ခြင်းကိုရယူပါသို့မဟုတ်သင်၏မူလမူရင်းနှင့်ဓါးကိုလဲလှယ်ပါ။ ပြည်တွင်းအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကိုယူပါ။
Audi Key Button Pad 2/3 ခလုတ် Audi A3 A4 A5 A6 A8 Q5 Q7 T အဝေးထိန်း Key Shell Fob အဖုံး Case Pads Replacement
Audi Key Button Pad 2/3 ခလုတ်အတွက် Audi A3 A4 A5 A6 A8 Q5 Q7 T Remote Key Shell Fob မျက်နှာပြင်အဖုံးပခုံးအစားထိုးအခြေအနေ: 100% Brand New Color: Black Button: 2/3 Button Transponder Chip: အီလက်ထရောနစ် / ဘက်ထရီမရှိပါ။ အဘယ်သူမျှမအင်္ဂါရပ်များ: ဒါဟာသင်တို့၏ဟောင်းနွမ်းသို့မဟုတ်ခွဲထွက်ပျက်စီးခလုတ် pad ကိုများအတွက်အလွန်ကြီးစွာသောအစားထိုးသည်။ သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာသင်၏ဝေးလံခေါင်ဖျားကိုဖွင့်ပြီးရာဘာကွင်းအစားထိုးပြီးနောက်ဝယ်နှစ်ခုကိုတွန်းထုတ်ပါ။ မင်းရဲ့လက်ရှိဝေးလံခေါင်ဖျားတူညီနေသရွေ့ ...
2/2 + 1/3/3 + 1 ခလုတ်များ Audi TT A2 A3 A4 A6 A8 Quattro အဝေးထိန်းသော့ခတ် Blade CR2032 နှင့်သင့်လျော်သောခေါက်ပါသောခလုတ်ခလုတ်များ
2/2 + 1/3/3 + 1 ခလုတ်များ Audi TT A2 A3 A4 A6 A8 A6 A8 Quattro အဝေးထိန်းခလုတ်ခုံပါသောခေါက်ပါသောခလုတ်ခုံဖိနပ်အဖုံးနှင့်အတူအခွအေနေ - 100% Brand New Colour: ပုံပြသကဲ့သို့ခလုတ်: 2/2 + 1/3/3 + 1 ခလုတ်များ Key Blank: ဟုတ်သည် Transponder Chip: လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ ဘက်ထရီမရှိပါ။ အလေးချိန် - ၅၀ ဂ Fitment - Audi A3 2006-2011 အတွက် Audi A4 1995-2001 Audi S4 1995-2002 နှင့်အခြားသူများအတွက်…အရေးကြီးမှတ်စု : ဤပစ္စည်းသည်အဝေးတစ်နေရာမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ဝေးလံသော key shell shell case ကိုအစားထိုးခြင်းသာဖြစ်သည်။ ၂။
Audi TT A4 A5 S4 S5 Q7 SQ7 2017 ၂၀၁၈ ၂၀၁၈ Audi TT A4 အတွက်ခလုတ်ခုံသုံးခေါက် Smart Remote Car Key Shell
Audi TT A4 A5 S4 S5 Q7 SQ7 2017 ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် Audi TT A4 A5 S4 အတွက် S3 ၏ခလုပ် ၃ / ၄ ခလောက် Smart Remote Car Key Shell: အစားထိုးအလွတ်ပစ္စည်းအခွအေနေ ၁၀၀% အရောင်အသစ်: Black Button: 3/4 ခလုတ်များ Transponder Chip: NO အီလက်ထရောနစ် / ဘက်ထရီ - အလေးချိန်မရှိပါ 46g အရွယ်အစား - ၈.၅ စင်တီမီတာ * ၃.၉ စင်တီမီတာ * ၁.၅ စင်တီမီတာ (L * W * H) အင်္ဂါရပ်များ - ကျိုးပဲ့သောခလုတ်များသို့မဟုတ် ၀ တ်ဆင်ထားသောသော့ခလောက်ဖြင့်သော့တစ်ချောင်းကိုအကောင်းဆုံးအစားထိုးခြင်း။ ၂။ Key case နှင့် uncut key blade သာဖြစ်သည်။ 3. ဒေသခံသော့ခတ်သူ / ကုန်သည်မှဖြတ်တောက်ခြင်းကိုရယူပါသို့မဟုတ်သင်၏မူလမူရင်းနှင့်ဓါးကိုလဲလှယ်ပါ။ 4. ယူပါ ...